के तपाईं दुब्ला मांसपेशी र कडा हड्डीहरू निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? के तपाइँ तपाइँको एथलेटिक प्रदर्शन र लडाई वृद्धावस्था सुधार गर्ने आशा गर्दै हुनुहुन्छ?
के तपाईंले आफ्नो आहार र व्यायाम कार्यक्रमहरूमा परिवर्तनहरू लागू गरिसक्नुभयो? यदि त्यसो हो भने तपाईंले सम्भवतः परिणामहरू देख्नुभयो। जे होस्, तपाई अधिकको लागि भोकाउनुहुनेछ, र MK-677 "थप केहि" तपाईलाई चाहिने हुन सक्छ।
MK-677 र यसले कसरी तपाईंको शरीर, दिमाग, र समग्र स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ बारे थप जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
MK-677 के हो?
MK-677, वा Ibutamoren, एक चयनित एन्ड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर (SARM) हो। SARMs ले नकारात्मक स्टेरोइडसँग मिल्दो फाइदा प्रदान गर्दछ सम्बन्धित नकारात्मक साइड इफेक्टहरू बिना।
MK-677 ले आईजीएफ -१ को स्तर र शरीरमा वृद्धि हर्मोनको स्तर बढाउँदै यसको फाइदाहरू उत्पादन गर्दछ।
पिट्यूटरी ग्रंथिले प्राकृतिक रूपमा हार्मोन उत्पादन गर्दछ। यो हर्मोनले सेल प्रजनन र पुनरुत्थानलाई बढावा दिन्छ।
विकास हार्मोन सामान्य बाल्यकालको विकासको लागि जिम्मेवार हुन्छ। यो निर्माण, मर्मत, र एक व्यक्ति को जीवन भर ऊतक मर्मत को लागी जिम्मेवार छ। अन्तमा, विकास हर्मोनले मेटाबोलिज्म र शरीरको संरचनालाई नियमित गर्दछ।
शरीर सौष्ठवहरू र अन्य एथलीटहरूले यी लाभहरू ठीकसँग खोज्दछन्। तसर्थ, तिनीहरूले विकास हार्मोनको स्तर बढाउने लक्ष्य राखेका छन्। दुर्भाग्यवस, जसरी शरीरको आयु हुन्छ, तथापि, विकास हर्मोनको स्तर स्वाभाविक रूपले खस्छ।
धेरै बडी बिल्डरहरू यी गिरावटहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित प्रभावहरूलाई उल्ट्याउन MK-677 मा फर्कन्छन्।
ग्रोथ हार्मोनको कमीका लक्षणहरू के हुन्?
जब विकास हार्मोनको स्तर घट्छ, शरीरमा धेरै परिवर्तनहरू प्रदर्शन गर्दछ। यी परिवर्तनहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्।
कम वृद्धि हर्मोन तहको प्रभावमा समावेश हुन सक्छ:
बढेको फ्याट स्टोरहरू
छाला छाला र घट्ने छाला लोचका अन्य प्रभावहरू
कम ऊर्जा र धीरज
गुर्दा समारोह कम भयो
"खराब" LDL कोलेस्ट्रॉल स्तर वृद्धि भयो
मेमोरी र फोकसको साथ कठिनाई
मनोवैज्ञानिक डिसफंक्शन, अलगावको अधिक भावनाहरू सहित र नकारात्मक भावनाहरूसँग डिल गर्दा बढ्दो कठिनाई
यदि तपाईंले यी लक्षणहरू देख्नुभयो भने, MK-677 थेरेपी तिनीहरूलाई उल्ट्याउन सहयोग गर्न सक्छ।
कसरी MK-677 काम गर्दछ?
MK-677 ले वृद्धि हर्मोनको स्तर बढाउँछ जुन माथिको कार्यहरूको लागि जिम्मेवार छन्।
विकास हार्मोन उत्पादन गर्न, पिट्युटरी ग्रंथि र हाइपोथैलेमस सक्रिय हुनु पर्छ। विकास हार्मोनको उपयोग गर्न, बदलेमा, हर्मोन रिसेप्टर्स सक्रिय गर्न आवश्यक छ।
सेक्रेटोगोग हार्मोन उत्पादन सक्रिय गर्नका लागि जिम्मेवार छन्। यसैबीच, एगोनिस्टहरू हर्मोन रिसेप्टर्स सक्रिय गर्नका लागि जिम्मेवार छन्।
सेक्रेटोगोग्स पदार्थहरू हुन् जसले अन्य पदार्थहरू उत्पादन गर्न निम्त्याउँछन्। प्राकृतिक रूपमा हुने हार्मोन घेरिलिन एक वृद्धि हार्मोन सेक्र्यागोग हो। घ्रेलिनले पिट्यूटरी ग्रंथि र हाइपोथैलेमसलाई विकास हर्मोन उत्पादन गर्न प्रोम्प्ट गर्दछ।
MK-677 ले यो कार्यको नक्कल गर्दछ, यसले सम्भावित शक्तिशाली वृद्धि हार्मोन सेक्रेटगोग (GHS) बनाउँछ।
MK-677 ले शरीरको Grelin आपूर्तिको प्रभावकारिता बढाउँदै वृद्धि हार्मोनको स्तर बढाउँछ। एक घोरेलिन एगोनिस्टको रूपमा, MK-677 घ्रेलिन रिसेप्टर्स सक्रिय गर्दछ। Grelin, फेरि एक पटक, विकास हार्मोन को उत्पादन उत्तेजित गर्दछ।
MK-677 का फाइदा के हुन्?
विशेष गरी जब खाना र व्यायामको साथ संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ, MK-677 ले धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। यी लाभहरू मध्ये धेरैले कम वृद्धि हर्मोनको स्तरसँग सम्बन्धित प्रभावहरूलाई उल्ट्याउँछ।
IGF-1 र वृद्धि हार्मोनको स्तर बढाउँदै, MK-677 ले मांसपेशिहरूको समूह र शक्ति निर्माण गर्न सक्दछ।
MK-677 प्रयोगकर्ताहरूले an-१० केजीसम्म पातला मांसपेशी थप्नको लागि अनुमान गर्न सक्दछन्। हो, परिणाम व्यक्तिको वर्तमान स्वास्थ्य स्थितिमा निर्भर हुन्छ। यद्यपि, अध्ययनहरूले MK-5 का फाइदाहरू मांसपेशीको आकार र विभिन्न समूहहरूको लागि शक्तिमा देखाउँदछ। 10० बर्षे उमेरका बच्चाहरूको अध्ययनमा अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि वृद्धि हार्मोनको स्तर बढाउँदैछ मांसपेशी शक्ति वृद्धि.
स्वास्थ्य र उमेरको अतिरिक्त, आहार र व्यायाम कार्यक्रमहरूले पनि परिणामहरूलाई असर गर्दछ। MK-677 ले समग्र पोषणको एक घटकको रूपमा सबै भन्दा राम्रो परिणामहरू उत्पादन गर्दछ कसरत कार्यक्रम.
कम फ्याट स्टोरहरू
मोटो व्यक्तिहरू विकास हर्मोनको कमीका लागि विशेष जोखिममा हुन सक्छन्। न्यून स्तरको विकास हर्मोनको मतलब, यी व्यक्तिहरू बोसो जलाउन र दुब्ला मांसपेशिको निर्माण गर्न संघर्ष गर्दछन्। तिनीहरू पनि हृदय रोग सहित, दीर्घकालीन अवस्थाको जोखिममा छन्।
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि MK-677 को साथ उपचारले IGF-1 र ग्रोम हार्मोनको स्तरमा उल्लेखनीय बृद्धि गर्न सक्छ। एउटा अध्ययनमा सहभागीहरूले आईजीएफ -१ स्तर 1०% सम्म बढेको देखे। आईजीएफ -१ र वृद्धि हर्मोनको स्तर बढ्दै जाँदा, सहभागीहरूले उनीहरूको बेसल चयापचय दरमा वृद्धि पनि प्रदर्शन गरे। सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सहभागीहरूले 'फ्याट-फ्रि मासमा लगातार वृद्धि देखाए।
यी परिणामहरूले सुझाव दिन्छ कि MK-677 ले मात्र मांसपेशिको निर्माण गर्दछ। यो पनि गर्न सक्छ समग्र शरीर संरचना सुधार गर्नुहोस्.
हड्डीको शक्ति बढ्यो
हड्डीको शक्ति सबै जनसंख्याको लागि चिन्ताको विषय हो। जे होस्, हड्डीको घनत्व निर्माण र त्यसलाई कायम राख्नु शरीर सौष्ठवकर्ताहरू र अन्य समूहहरूको लागि विशेष चिन्ताको विषय हुन सक्छ। शरीर सौष्ठवकर्ताहरूको साथसाथै, महिलाहरू, बुढा मानिसहरू र मोटोपना व्यक्तिले हड्डीको बललाई ध्यान दिएर हेर्नु आवश्यक पर्दछ।
MK-677 यी प्रत्येक समूहमा हड्डी स्वास्थ्य प्रबर्धन गर्ने वाचा देखाउँदछ।
अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि MK-677 शरीरको हड्डी निर्माण प्रयास वृद्धि गर्दछ बुजुर्ग विषयमा। MK-677 को दैनिक मौखिक खुराक प्राप्त गरिसकेपछि, विषयहरूमा अस्थिरोगको मात्राको उच्च स्तर थियो। Osteocalcin हड्डीको गठनको लागि आवश्यक एक प्रोटीन हार्मोन हो।
पोस्ट-मेनोपौसल महिलाहरू MK-677 लिँदा त्यस्तै फाइदाहरू अनुभव गरे। यस अध्ययनमा महिला विषयहरूले MK-677 को दैनिक खुराक लिए। नतिजाको रूपमा, उनीहरूको हार्मोनको स्तर बढ्यो। बढ्दो वृद्धि हार्मोनको स्तर, फलस्वरूप, हड्डी घनत्व वृद्धि भयो।
अन्वेषकहरूले सुझाव दिए कि यी प्रभावहरू विकास हर्मोनहरूले ओस्टियोब्लास्टहरूलाई उत्तेजित गरे पछि भयो। ओस्टियोब्लास्टहरू नयाँ हड्डी गठन गर्न जिम्मेवार कोषहरू हुन्।
अन्त्यमा, मोटोपनको अध्ययन तर अन्यथा स्वस्थ पुरुषहरूले पुरुष विषयहरूमा MK-677 मा पनि फाइदाजनक प्रभावहरूको पुष्टि गरे।
MK-677 सबै भन्दा ठूलो फाइदाहरू प्रदान गर्दछ जब यो पोषण र कसरत आहारमा एकीकृत हुन्छ। भाग्यवस, MK-677 एक कसरत पनी संग सजीलो बनाउन सक्दछ।
अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि GHS, MK-677 जस्ता, विषयहरूको क्षमता सुधार गर्न सक्दछ गहन कसरत सहन गर्नुहोस्। थप धीरज सुधार, उच्च वृद्धि हार्मोनको स्तर पनि सुधारिएको अक्सीजन सेवन संग सम्बन्धित छ।
शरीरको बढ्न र बिग्रिएको-कोषहरू प्रतिस्थापन गर्न कोशिस गर्न पर्याप्त निद्रा आवश्यक छ। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, तब वृद्धि हर्मोनको स्तर बढेको निद्रासँग सम्बन्धित छ।
अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि MK-677 गर्न सक्छ गहिरो REM निद्रा बढावा र निद्राको गुणस्तर सुधार गर्नुहोस्। यी प्रभावहरू वयस्क व्यक्तिको बीचमा पनि समात्छन् जसले उपचार अघि, निद्रा गडबडी अनुभव गरेका थिए।
सुधारिएको छाला स्वास्थ्य
जब एक व्यक्तिको उमेर र वृद्धि हर्मोनको स्तर घट्छ, छालाको लोच पनि कम हुन्छ। बढ्दो वृद्धि हर्मोन तहले यी प्रभावहरूलाई उल्ट्याउन सक्छ।
60० बर्षे पुरुषको अध्ययनले देखाए कि वृद्धि हार्मोनको स्तर बढाउँदैछ छालाको मोटाई बढायो 7.1% द्वारा।
वृद्धि हार्मोनको स्तर बढाउँदै, MK-677 ले छालाको स्वास्थ्य प्रमोट गर्न सक्छ।
शरीरको विकास हार्मोनको स्तर स्वाभाविक रूपमा एक व्यक्तिको उमेरको रूपमा झर्छ। बुढ्यौलीका धेरै असर यी स्तरहरू खस्दा आउँछन्।
विकास हार्मोन सेल प्रजनन र पुनर्जीवनको लागि जिम्मेवार छ। जबसम्म शरीरले नयाँ कोषहरू उत्पादन गर्न जारी राख्दछ पुरानो, थकित-बाहिर कोषहरू प्रतिस्थापन गर्न, शरीर राम्रोसँग कार्य गर्दछ। जब शरीरको पहिरन भएको कोशिका प्रतिस्थापन गर्न कोशिस गर्दछ, एक व्यक्ति थकित र दुखी महसुस गर्दछ। यसबाहेक, शरीर प्रणाली अब राम्रोसँग कार्य गर्दैन।
GHS हरू, grelin जस्ता, वृद्धि हार्मोनको स्तर बढाउन र, यसैले यी प्रभावहरूको काउन्टर गर्न सक्दछ। एउटा अध्ययनले घेरलिनलाई मौखिक रूपमा वृद्ध पुरुष र महिला विषयहरूमा प्रशासित गर्‍यो। अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि घ्रेलिनले बुढेसकालमा भाग लिने ' IGF-1 र वृद्धि हार्मोन स्तरहरू युवा वयस्कहरूको लागि।
घ्रेलिनको प्रभावहरूको नक्कल गरेर, MK-677 ले त्यस्तै फाइदा लिन सक्छ।
सुधारिएको संज्ञानात्मक समारोह
MK-677 ले शरीरको प्राकृतिक आपूर्ति घेरिलिनको प्रभावकारिता बढाउँछ। अक्सर "भोक हार्मोन" को रूपमा वर्णन गरिएको, घ्रेलिनले भोक जगाउँछ। माथि छलफल गरे जस्तै, grelin पनि विकास हार्मोन को उत्पादन उत्तेजित गर्दछ।
यद्यपि अधिक भर्खरका अध्ययनहरूले सुझाव दिए कि घ्रेलिन पनि हुन सक्छ मस्तिष्क कोशिका बृद्धिलाई उत्तेजित गर्नुहोस् र पुनर्जनन। धेरै व्यक्ति खाली पेटमा बढी स्पष्ट सोच्न सक्षम भएको रिपोर्ट गर्छन्। वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि घरेलिन यस मानसिक स्पष्टताको लागि जिम्मेवार हुन सक्छन्।
एउटा अध्ययनले घेरिलिनलाई चूहोंमा इंजेक्सन दियो। यो पाए कि यी इंजेक्शनहरू कृन्तकहरूको सम्झनाहरुमा सुधार भयो। यसले तिनीहरूलाई नयाँ अवधारणाहरू अझ राम्रा र छिटो सिक्न पनि मद्दत पुर्‍यायो।
एक grelin एगोनिस्टको रूपमा अभिनय गरेर, MK-677 मानव बीचमा यस्तै फाइदाहरू प्रदान गर्न सक्दछ। संक्षेप मा, MK-677 दुबै आफ्नो शरीर र आफ्नो दिमाग जवान राख्न सक्छ।
सुधारिएको मनोवैज्ञानिक कल्याणकारी
विकास हार्मोनको तल्लो स्तर कम मनोवैज्ञानिक कल्याणसँग सम्बन्धित छ। उपचार जसले वृद्धि हार्मोनको स्तर बढाउँछ यी व्यक्तिहरूमा जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने सम्भाव्यता देखाउँदछ।
उपचार पछि वृद्धि हार्मोनको स्तर वृद्धि गर्न, वयस्क विषयहरु रिपोर्ट गरियो सुधार गरिएको मुड र ऊर्जा स्तर.
वृद्धि हर्मोनको स्तर बढाउँदै, MK-677 मनोवैज्ञानिक कल्याण सुधार गर्न सक्दछ।
MK-677 को साइड इफेक्ट के छन्?
को एक फाइदा MK-677 र अन्य SARMs उनीहरूको स्टेरोइड जस्तो फाइदा उत्पादन गर्न को लागी सम्बन्धित साइड इफेक्टबिना क्षमता हो।
स्टेरोइड प्रयोग सम्बन्धित छ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम। यसको कारण स्टेरोइडले मांसपेशीहरू र हड्डीहरूमा हर्मोन रिसेप्टर्स मात्र होइन। स्टेरोइडहरूले मस्तिष्क, आँखा र छालामा रिसेप्टर्सलाई पनि बाँध्छ। त्यसो गर्दा, स्टेरोइडहरूले नकारात्मक प्रभावहरूको एक मेजबान उत्पादन गर्दछ।
किनभने तिनीहरू केवल मांसपेशी र हड्डी रिसेप्टर्समा बाँध्छन्, MK-677 र अन्य SARM हरूले अधिक सुरक्षित विकल्प प्रदान गर्दछ।
MK-677 बाट साइड इफेक्ट हल्का छन् र प्राय: परिणामस्वरूप प्रयोगकर्ताहरूले सिफारिस गरिएको खुराक भन्दा बढी लिन्छन्। तिनीहरूले समावेश गर्न सक्छन्:
इन्सुलिन प्रतिरोध वृद्धि भयो
मधुमेह रोगीहरूका लागि इन्सुलिन प्रतिरोध क्षमता बढाउन MK-677 को सम्भावना समस्याग्रस्त हुन सक्छ। मानिस जसले बढ्दो इन्सुलिन संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्छन् MK-677 लिदा पनि तिनीहरूको लक्षणहरू बिगार्न सक्छ। यी व्यक्तिहरूले एक MK-677 आहार वा कुनै पूरक सुरु गर्नु अघि डाक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
के MK-677 ले टाउको दुखाइ दिन्छ?
केहि प्रयोगकर्ताहरूले अधिक लगातार टाउको दुख्ने रिपोर्ट गर्दछ जब MK-677 लिन्छन्। जे होस्, MK-677 सँग सम्बन्धित साइड इफेक्टहरूमा, टाउको दुखाइ सूचीबद्ध गरिएको छैन। कुन कुरा छोडिन्छ?
वास्तवमा, MK-677 ले टाउको दुखाइको कारण गर्दैन। MK-677 को उपयोग र टाउको दुखाइको बीचमा लिंक फेला पार्न बारम्बार अध्ययनहरू विफल भए।
अन्य सम्भावित साइड इफेक्टको रूपमा, प्रयोगकर्ताहरूले केवल टाउको दुख्ने अनुभव गर्न सक्दछ जब तिनीहरूले MK-677 अनुचित रूपमा लिन्छन्।
विशेषज्ञहरूले पानीको अवधारणलाई टाउको दुखाइको एक व्याख्याको रूपमा सुझाव दिन्छन् केही MK-677 प्रयोगकर्ताहरूले रिपोर्ट गर्छन्। उच्च खुराकमा लिइएको, MK-677 ले शरीरलाई तरल पदार्थ राख्न सक्छ। यो विशेषगरि व्यक्तिहरूमा सत्य हो जसले पर्याप्त पानी पिउँदैनन्।
जब शरीरले लामो समय अवधिमा तरल पदार्थ कायम गर्दछ, रक्तचाप बढ्न सक्दछ। रक्तचाप बढेको छ टाउको दुख्न सक्छ।
यदि तपाइँले सिफारिश गरिएको खुराक लिनुभयो र धेरै पानी पिउनुभयो भने, तपाइँ निश्चिन्त हुन सक्नुहुन्छ कि MK-677 तपाइँको टाउको दुखाइको कारण छैन।
म कसरी मेरो स्वास्थ्य विधिमा MK-677 सम्मिलित गर्न सक्छु?
Ibutamoren MK-677 मौखिक रूपमा सक्रिय छ। यसको मतलब यो छ कि तपाइँ यसलाई एक गोली को रूपमा मुख द्वारा लिन सक्नुहुन्छ।
सिफारिश गरिएको खुराक लिंग र व्यक्तिको बीचमा भिन्न हुन्छ।
अधिकांश पुरुषहरूले दैनिक 5-२25 मिलीग्राम / दिनको एक खुराकको साथ लाभहरू अनुभव गर्दछन्। महिलाहरूको लागि सिफारिश गरिएको खुराक -5-१-15 मिलीग्राम / दिनको हुन्छ।
MK-677 एक 24-घण्टा आधा जीवन छ। यसको मतलब यो छ कि २K घण्टा सम्म MK-24 677 for को स्तर आधा गिरावटको लागि do पछि। त्यसकारण, प्रयोगकर्ताहरूले एकल दैनिक खुराक लिन सक्छन्। जे होस्, MK-677 स्तर चार भन्दा छ घण्टा पछि चोटी। यसैले, विशेषज्ञहरूले MK-677 को विभाजित खुराक लिने सल्लाह दिन्छन्।
खुराकको लागि आदर्श समयहरू करीव -०-30० मिनेटहरू एक कसरत अघि र खाना पछि।
दुबै पुरुष र महिलाहरूको लागि, MK-677 चक्रमा लिँदा सबैभन्दा अधिक सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। इष्टतम MK-677 चक्र पुरुषहरु को लागी to देखि १ 8 हप्ता र महिलाहरुको लागी 14--6 हप्ता सम्म छ।
अझै, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले MK-677 अनिश्चितकालीन लिन्छन्।
स्ट्याकिंग MK-677 र अन्य SARMs
स्ट्याकिंगले पूरकहरू संयोजनको अभ्यासलाई जनाउँछ। MK-677 अन्य SARM का साथ संयोजनले यी मिश्रणहरूलाई सँगै काम गर्न अनुमति दिन सक्छ। बहु SARM को प्रभावहरूलाई मिलाएर, प्रयोगकर्ताहरूले राम्रो र छिटो परिणामहरू हेर्न सक्दछन्।
MK-677 को साथ स्ट्याक गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो SARMs समावेश गर्दछ Ostarine, Andarine S-4, र कार्डारीन। यी SARM हरूको cles-१२ हप्ताको चक्रमा राख्दा सबैभन्दा ठूलो फाइदाहरू हुन्छन्।
बॉडीबिल्डर्सले MK-677 लाई काट्न र बल्किंग चक्रमा समावेश गर्न सक्दछ। MK-677 संग स्ट्याकिंग Ligandrol LGD-4033 मांसपेशियों को ठूलो लाभ को प्रचार को लागी आदर्श हो। MK-677 संग स्ट्याकिंग Andarine S-4 र GW-501516 ले फ्याट लॉस बढावा दिन सक्छ।
MK-677 संग स्ट्याकिंग कार्डारीन GW-501516 धीरज पनि सुधार गर्न सक्छ।
परिणामहरू हेर्न कति समय लाग्छ?
MK-677 IGF-1 र वृद्धि हर्मोनको स्तर बढाउन द्रुत रूपमा काम गर्दछ। इन्जेस्सनको लगत्तै पछि, यी स्तरहरू नाटकीय रूपमा बढ्छ। प्रयोगकर्ताहरूले प्राय एक हप्ता भित्र फाइदा हेर्ने रिपोर्ट गर्छन्।
MK-677 को साथ एक स्वस्थ शरीर र मनको निर्माण गर्दै
शरीर सौष्ठवकर्ताहरू र अन्य मांसपेशीहरूको शक्ति र शरीर संरचना संग सम्बन्धित अन्य MK-677 बाट लाभान्वित हुन सक्छ। MK-677 को फाइदा शारीरिक भन्दा बाहिर विस्तार, तथापि। तिनीहरूमा बढि संज्ञानात्मक कार्य समावेश छ र मनोवैज्ञानिक कल्याण सुधार गर्दछ।
समग्र आहार र कसरत आहारको साथ MK-677 पूरक संयोजन संयोजन यी लाभहरूलाई अधिकतम गर्दछ।
जब तपाइँ तपाइँको स्वास्थ्य योजना डिजाइन गर्नुहुन्छ, तपाइँको सबै आवश्यकताको लागि SARMs Store मा गणना गर्नुहोस्। हामी एक विश्वसनीय SARMs ब्रिटेन वितरक हो। हाम्रो जाँच गर्नुहोस् अन्य ब्लग पोष्टहरू अधिक जान्न वा आज किनमेल शुरू गर्न।